VERY OLOMANGA ANTSIRANANA : Nodimandry teo amin’ny faha-63 taonany i Jean Robert
Manjombona ny andro ho an’ny Faritanin’Antsiranana. Namoy olomanga isany nahavita be teo amin’ny fampandrosoana an’iny Faritra iny ireo mponina. 12 juin 2019
Nodimandry, omaly maraina teo amin’ny faha-63 taonany i Gara Laurence Jean Robert izay Governoran’ny faritany mizaka tenan’Antsiranana tamin’ny taona 2000 tao anatin’ ny fitondran’ny Filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Maro ireo fampandrosoana noentiny tao Antsiranana ary isan’ ireo niady mafy ny hahazoana izay Faritany mizaka tena izay ny tenany. Nitondra avo ny lentan’ny fanatanjahantena ihany koa i Gara Laurence Jean Robert nandritra ny fahatanorany. Nampalaza azy tamin’izany ny filalaovana baskety nivondronany tao anatin’ny ekipan’ny Gofa ary efa nisy azy ihany koa ny ekipa mpilalao baolina kitran’i Jirama tamin’izany fotoana. Sangany teo amin’ny tontolon’ny baolina kitra ny tenany ary isan’ireo efa voaantso handrafitra ny ekipam-pirenena mihitsy.
Ny talata 11 jona tamin’ny 3 ora maraina no nodimandry teto Antananarivo izy rehefa nialana nenina tetsy amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona Ampefiloha. Omaly maraina io ihany no nanainga hihazo an’Antsiranana, toerana niaviany ny nofo mangatsiakany ary any an-toerana ihany no fantatra fa hanatanterahana ny fandevenana ny nofo mangatsiakany. Izahay ekipa rehetra eto amin’ny gazety InoVaovao Faritra dia mirary fiononana feno ho an’ny vady aman-janaka navelany sy ny fianakaviana iray manontolo.